The 2020 NAB Show: Creative Visionary များအတွက်ပြည့်စုံသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးတစ်ခု NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » The 2020 NAB Show: Creative Visionaries အတွက်အကောင်းဆုံးသောစျေးကွက်တစ်ခု
The 2020 NAB Show: Creative Visionaries အတွက်အကောင်းဆုံးသောစျေးကွက်တစ်ခု
Podcast လုပ်ငန်းသည်တီထွင်ဖန်တီးမှု၏အသံအတွက်ထိရောက်သောဆက်သွယ်ရေးနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော် podcast သည်ယခုအချိန်အထိအမြော်အမြင်ရှိရှိယူနိုင်သည်၊ 2020 NAB ပြရန် ကူညီနိုင်သည် ဤသည်Aprilပြီလ 2020 NAB ပြရန် Nevada, Las Vegas မှာကျင်းပလိမ့်မယ် ၎င်းသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိနောက်ခံအမျိုးမျိုး၏ဖန်တီးမှုများကိုအတူတကွပေါင်းစပ်စေလိမ့်မည်။ အားလုံးနီးပါးသည်သူတို့၏နှလုံးသားအတွင်းသိကြသောတီထွင်မှုရှိသောအသံကိုဝေမျှရန်နှင့်ကျယ်ပြန့်ရန်စိတ်အားထက်သန်သောအမြော်အမြင်ရှိသူအားလုံး၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ဂေဟစနစ်တစ်ခုလုံးကိုအတူတကွပေါင်းစည်းစေလိမ့်မည်။
အဘယ်ကြောင့် The 2020 NAB ပြရန်?
အဆိုပါ 2020 NAB ပြရန် အဆုံးစွန်သောမီဒီယာ, ဖျော်ဖြေရေးနှင့်နည်းပညာဖြစ်ရပ်။ ဤနှစ်ပတ်လည်အဖြစ်အပျက်၏နောက်ကွယ်ရည်ရွယ်ချက်မှာ podcast / ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းမှဖန်တီးမှုများပေါင်းစည်းခြင်း၊ သူတို့၏အလုပ်အကိုင်များကိုမြှင့်တင်ခြင်း၊ ဗဟုသုတနှင့်ဉာဏ်ပညာဆည်းပူးခြင်းနှင့်စွမ်းအင်သုံးအင်ဂျင်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ဖြစ်သည် စက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများ။ တက်ရောက်ခြင်းဖြင့်သာ 2020 NAB ပြရန် ရည်မှန်းချက်ကြီးမားသောတီထွင်ဖန်တီးမှုများသည်၎င်းတို့အားအမှတ်တံဆိပ်များတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်သောဆက်သွယ်မှုများကိုရရှိနိုင်သည်။ Podcast သည်ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းနှင့်မည်သည့်ဒစ်ဂျစ်တယ်တော်လှန်ရေးတွင်မဆိုရေဒီယိုနှင့်ရေဒီယို podcast နည်းပညာတိုးတက်မှုများဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသောမည်သူမဆိုအားပေးသည်။
စျေးကွက်မဟာဗျူဟာ ၂၀၂၀ NAB ပြရန် ကမ်းလှမ်းချက်များ
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်အမှတ်တံဆိပ်သည်တီထွင်သူများရည်ရွယ်ထားသည့်အတိုင်းထက်ကျော်လွန်အောင်ကူညီရန်မှာစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းပြီးအခြေခံကျသည်။ တီထွင်ဖန်တီးမှုမည်မျှသိကြောင်းနှင့်သူတို့၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုမည်မျှရောင်းချနိုင်ကြောင်းကန့်သတ်ချက်အမြဲရှိသည်။ သို့သော် 2020 NAB ပြရန် မတိုဘူး စျေးကွက်ရှာဖွေရေးရွေးချယ်စရာများ။ ဖန်တီးမှုရှိမရှိ 2020 NAB ပြရန် အသစ်စက်စက် starters များသို့မဟုတ်ရှည်လျားသောကြိုးစားအားထုတ်မှု underdogs များမှာ၎င်းတို့ကဲ့သို့သောမယုံနိုင်လောက်အောင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိရိယာများမှအကျိုးရှိလိမ့်မည်။
2020 NAB ပြရန် Conferences က
မည်သည့်တီထွင်ဖန်တီးမှုမျိုးကိုမဆိုကြည့်ချင်သည်မှာသူတို့အမှတ်တံဆိပ်၏သတင်းကိုထိထိရောက်ရောက်မည်သို့ဆက်သွယ်နိုင်သည်၊ 2020 NAB ပြပွဲကွန်ဖရ အစကောင်း ၂၀၂၀ တွင်ကျင်းပသောညီလာခံအများအပြား NAB ပြရန် ပါဝင်:
ဤရွေ့ကားရုံမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်များစွာသောအချို့ဖြစ်ကြသည် ပညာရေးအခွင့်အလမ်းများ မှာတီထွင်ဖန်တီးမှုမှပွင့်လင်း 2020 NAB ပြရန်.
2020 NAB ပြရန် Spe ည့်သည်စပီ
အဆိုပါ 2020 NAB ပြရန် ရှိပါတယ် အဓိကပြောသူ တစ်ခုချင်းစီကိုမီဒီယာ၊ ဖျော်ဖြေရေးနှင့်နည်းပညာဂိမ်းများတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ဤအရာအားလုံး အဓိကပြောသူ ကောင်းစွာချိတ်ဆက်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ပညာကိုအပေါ်ဘယ်တော့မှမ။ ၂၀၂၀ ကိုတက်ရောက်သူ NAB ပြရန် အောက်ပါတို့ကဲ့သို့သောအဓိကကျသောဟောပြောသူများ၏နားထောင်ခြင်းမှသင်ယူနိုင်သည်
Peter Ramsey (ပင့်ကူလူသား: အဆိုပါပင့်ကူ-အခနျးငယျသို့)
မာ့ခ် Batellgia (Marriott ဟာဒီအမှုမပေါ်အင်တာနေရှင်နယ်)
YuChiang Cheng (Topgolf မီဒီယာ)
Byron Allen က (ဖျော်ဖြေရေးစတူဒီယိုများ)
ဤကြီးမားသောစိတ်များနှင့်တက်ရောက်သူများပြားသောစပီကာများနှင့်အတူတီထွင်သူများသည်သူတို့၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုဆက်သွယ်ရေးတွင်စျေးကွက်ချဲ့ထွင်နိုင်ပုံနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံဥာဏ်များ၊ အကြံဥာဏ်များနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုများစွာပေးသည်။
2020 NAB ပြရန် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့်လေ့ကျင့်ရေး
“ အလေ့အကျင့်သည်ပြီးပြည့်စုံစေသည်” ဟူသောအသုံးအနှုန်းကနည်းနည်းပါးပါးရှုပ်ထွေးနေပုံရသော်လည်း၎င်း၏မီးတောက်ဘယ်တော့မျှမပျောက်ပါ။ The 2020 NAB ပြရန် များစွာသောထိရောက်သောနှင့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောနေရာဖြစ်သည် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲနှင့်လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များသူတို့၏စွမ်းရည်များကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်နှင့်ကြိုးပမ်းရန်ရှာဖွေနေကြသည့်ပညာရှင်များကိုအသေးစိတ်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသော။ ဒီဟာတွေဟာသူတို့ရဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေကိုလက်တွေ့ဘ ၀ မှာစမ်းသပ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့တီထွင်ဖန်တီးသူတွေအတွက်အရေးကြီးတယ်။ တက်ရောက်ခြင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့်လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များ အဆိုပါ 2020 မှာ NAB ပြရန် တီထွင်ဖန်တီးမှုစက်မှုလုပ်ငန်းအကောင်းမြင်ထံမှသင်ယူကူညီပေးပါမည်။ အထူးအစီအစဉ်များမှာ -
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့်လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များကိုပြင်ပနှင့်စာသင်ခန်းအတွင်း၌ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ podcast / ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းမှာတိုးတက်အောင်လုပ်တဲ့အပူဆုံးခေတ်ရေစီးကြောင်း၊ နည်းပညာတွေနဲ့အသုံးချပရိုဂရမ်တွေအကြောင်းသူတို့ကတင်ပြသွားမယ်။
အဆိုပါ 2020 NAB ပြရန် ပညာရေး အစီအစဉ်များကိုလုပ်ငန်း၏ထိပ်တန်းအမှုဆောင်အရာရှိများ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းဆန်းသစ်တီထွင်သူများနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအမြော်အမြင်ရှိသူများက ဦး ဆောင်သည်။ ဒီပရိုဂရမ်တွေဟာပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့လာပြီးထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးပေးတယ်။ 2020 တက်ရောက်ခြင်းအားဖြင့် NAB ပြပွဲစိတ်အားထက်သန်သောတီထွင်ဖန်တီးသူများသည်ဖြစ်နိုင်ခြေအသစ်များနှင့်အသစ်သောအတွေးအခေါ်များကိုထိရောက်စွာရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။
All-Badge Access အစီအစဉ်များ
မည်သည့်တီထွင်ဖန်တီးမှုအသံသည်လူကြိုက်များသောအမှတ်တံဆိပ်၏အောင်မြင်မှုကိုရနိုင်သည် အထူးသဖြင့် Podcast / ရေဒီယိုလုပ်ငန်းများတွင်မည်သူမဆို ၄ င်းတို့၏အသံကိုတက်ကြွစွာ ဆက်သွယ်၍ စျေးကွက်ကိုထိထိရောက်ရောက်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနိုင်သောလွတ်လပ်ခွင့်ရှိသည့်အနုပညာအလှအပနှင့် ပတ်သက်၍ သံသယမရှိပါ။
အဆိုပါ 2020 NAB ပြရန် တီထွင်မှုမှန်သမျှသည်ရေဒီယို၊ ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းများတွင်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊ speakers ည့်စပီကာများနှင့်ယခုနှစ်မီဒီယာ / ဖျော်ဖြေရေးဖြစ်ရပ်များတွင်ကျင်းပမည့်ကွန်ဖရင့်များမှတစ်ဆင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုဈေးကွက်တင်ရန်အကောင်းဆုံးသောအခွင့်အရေးဖြစ်သည်။ 2020 NAB ပြရန် 18ပြီ 22-2020, XNUMX တွင်အရပျကိုယူလိမ့်မည် Las Vegas မှကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ။ မှတ်ပုံတင်ရန်, ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ 2020 NAB ပြရန် 2020 NAB Show Guest ည့်စပီ 2020 NAB ပြပွဲအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့်သင်တန်း ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း ဖျော်ဖြေရေး စက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများ Las Vegas မှ Las Vegas မှကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ NAB 2020 ပြပွဲကွန်ဖရင့် NAB16 Nevada podcast	2020-01-05